Oomatshini beNgcali bokuthengisa | Imveliso ye-yinrich
Imobile | I-WhatsApp | Wephapp: +861375056088 I-imeyile: Sales@yinrich.com
I-Lollipop Inombolo yemveliso
I-Lollipop Inombolo yokufaka
Iflethi ye-lollipop yokufa kunye nokusongela umatshini
Umgca wemveliso yejeli
I-jelly mogul yomatshini
I-jelly pieedy fackess
Ukuhlafuna i-gum kunye ne-bubble gum
Uhlobo lwe-pilmeme fuby gum
Umgca we-gubble gum
Umatshini wokungena kwitshokolethi
Umatshini wesandwich (ikuki capper)
Umgca wemveliso enzima
I-Fiecy Fiepy Fieds
I-Fiedy Fiecy De-Feline umgca
Inkqubo yokulinganisa ngokuzenzekelayo (Aws)
I-Flash Clocker Cooker (FCC)
Umpheki wefilimu omdaka (Bm)
I-jelly ye-jelly / i-marshmmby (cjc)
Ibhanti yokupholisa (i-SCB)
I-Rotor Comaker (RT)
I-Universal Daloundu Poiker (TC)
Inkqubo yokuGcina ngokukhawuleza
Iyunithi yokupheka ye-BHACTCT
Umatshini wokugcwalisa i-biscuit
Umgca wemveliso ye-marshmal
Ukuzaliswa kwe-macaron kunye nomatshini wokukhaba
I-Toffi kunye neChewy Caewy Findy Line
I-Toffi yokuGcina i-Toffee
I-Chewy Spied Capike kunye noMatshini osongelayo
Umgca othambileyo we-fed
Umgca wokuvelisa iLental
Inkonzo emva kokuthengiswa& Iwaranti
Oomatshini bokucofa isetyenziselwa ikakhulu ukuvelisa kunye nokupakisha iipipi. Isixhobo se-confectionery sasisetyenziselwa ukuveliswa kweepipi ezithambileyo, ikapisi ezinzima, ikati ezimfutshane, ii-lellipops, i-marshmals, kunye neepipi ezibiweyo. Kukho noomatshini bokupakisha iswekile edla ngokusetyenziswa kwishishini leswekile. Oomatshini bokuhamba, njengezinye iimveliso zoomatshini, kufuneka zipakishwe ngokwenyani, azifuni ukukhona okuninzi kwabantu, kwaye zinokuhlengahlengiswa kwiimfuno zeswekile ezenziweyo zokuvelisa iimveliso ze-conferaryry.
I-Yinrich yi-confectionery ye-confecionery eyovelisileyo, umenzi womatshini onzima, onomatshini owenzeyo othengiswayo, kubandakanya izixhobo ezincinci zokwenza amanqanaba amakhandlela. Njengabavelisi boomatshini abanobuchule boomatshini, i-yirrich iyakwazi ukulawula yonke inqanaba lomgangatho woomatshini bokuhambisa oomatshini. Kwangelo xesha, ixhotywe ngeqela letalente yobungcali ukubonelela abathengi ngeenkonzo ezibanzi.
Ijelly yokufaka umgca weelekese
I-GINQ ye-GINQ ye-YINRICH yenzelwe ngokukodwa ukwenza i-jelly yeelekese engafakwanga isitashi, umthamo ukusuka kwi-70kgs / h ukuya kuthi ga kwi-500kgs / h Iipaneli zokuchukumisa ze-HMI ukuze zisebenze ngokulula; Iipompo zokulinganisa ngenaliti ezenzekelayo yemibala, incasa kunye neeasidi; Imigca enemibala emibini, enemibala emibini etyibilikisiweyo, ukugcwaliswa okuphakathi, kunye neelekese ezi jelly ezingenanto zinokwenziwa kulo mgca. Ukufakwa okuqhutywa yi-servo kulawulwa yinkqubo ye-PLC.
QD uthotho lusetyenziselwa ukwenza amaziko etshokholethi ahlala emva koko egutyungelwe siswekile kunye nombala. La maziko angathatha iifom ezahlukeneyo, ezinjengeelentile, iibhola, iimbotyi zekofu okanye iiamangile. Umatshini unokuthi kwakhona uhlengahlengise ukuvelisa amaziko athile ukuhlangabezana neemfuno zabaxumi abakhethekileyo, kuthintelwe kuphela kukusikelwa umda kwengqiqo kweziko ngokwalo. Izinto zomgca ezenzelwe ukwandisa ukusebenza ngokukuko, ukuguquguquka kunye nococeko.
Umgca we-marshmallow owandisiweyo
Umatshini wothotho lwe-EM kukuba ubunzima bunyanzeliswa ngumphefumlo we-YINRICH, emva koko yahlulwe yaba yimilanjana emininzi. Incasa kunye nombala ziya kutofelwa kumjelo ngamnye. Emva koko unokuvelisa iintlobo ezahlukeneyo zemveliso nge-extruder ekhethekileyo ye-YINRICH, njengombala omnye, imibala edibeneyo, imibala emi-4 ejijekileyo, kunye nemveliso ekhutshwe iziko.
Ukugcwaliswa kweMacaroon kunye nomatshini wokufaka
I-YINRICH ye-JXJ yothotho lwe-macaroon yokugcwalisa kunye nokufaka umatshini inokusetyenziswa njengomatshini oxhomekekileyo, okanye ukunxibelelana ne-outlet yokuhambisa i-oveni eqhubekayo. Iikeyiki zihanjiswa ngesandla okanye ngokuzenzekelayo zigqithiselwe kumthuthi wakho ophumayo usiya kumatshini wokutya (okanye ugqitha kwiBiscuit magazine feeder kunye nenkqubo yesalathiso). Emva koko ii-cookies zikhethwa ngumbono we-mveliso, zilungelelaniswe, ziqokelelene, zihambelane, zifakwe inani elichanekileyo lokuzaliswa, emva koko zongeze umphezulu kwiimveliso. Iimacarons ezigqityiweyo emva koko zithunyelwa ngokuzenzekelayo kwitonela elibandayo, kunye nokusonga umatshini ngenkqubo engaphezulu.
Uhlobo lomqamlezo luhlafuna itshungama
Iqokobhe leswekile le-MT300AUhlobo lomqamelo luhlafuna intsini sisityalo esisandula ukwenziwa nguYINRICH. Le ntonga yokuhlafuna itshungama yimveliso yezixhobo eziphambili zokwenza uhlobo lomqamelo wokuhlafuna itshungama ngokutyabeka okanye imilo yesikwere iqokobhe eligutyungelwe iintsini zokuhlafuna. Uhlobo olupheleleyo lomqamlezo ohlafuna itshungama luqulathe i-orenji yesiseko seentsini, umxube, umgibeli, umatshini owenza umatshini, umatshini wokutyabeka iswekile njlnjl. Yindlela entsha yokulungisa itekhnoloji yokwenza uhlobo lomqamelo uhlafuna iintsini.Yinrich yingcaliabenzi bomatshini bokuhlafuna itshungama kunye nababoneleli, ngokukodwa kwimveliso yeentlobo ezahlukeneyo zomatshini wokuvelisa itshungama. Njengohlobo lomqamlezo ohlafuna itshungama.
Umgca wokufaka i-lollipop
Uthotho lwe-GDL lwe-YINRICH lwenzelwe ukwenza i-lollipops ezifakiweyo, umthamo ukusuka kwi-120kgs / h ukuya kuthi ga kwi-500kgs / h. Iipaneli zokuchukumisa ze-HMI ukuze zisebenze ngokulula; Iipompo zokulinganisa ngenaliti ezenzekelayo yemibala, incasa kunye neeasidi; Imigca enemibala emibini, enemibala emibini yokulayita, ukuzaliswa okuphakathi, kunye ne-lollipop ecacileyo inokwenziwa kulo mgca. Ukufakwa okuqhutywa yi-servo kulawulwa yinkqubo ye-PLC. Inkqubo yokufaka intonga ngokuzenzekelayo iyafumaneka.
Umatshini weSandwich (Cookie Capper)
Le vidiyo ngumatshini wesandwich (umqambi wecookie) Yenziwe nguYinrich, ongumtya wecookie, umatshini wecookie yesandwich. U-Yinrich yingcaliumenzi wezixhobo ze-confectionery. Kwangelo xesha, ikwabonelela ngomatshini wesandwich ohlukeneyo (ikuki yecookie) kunye noomatshini beebhiskithi cream ukulungiselela isityalo esivelisa iicookies.Lo matshini we-JXJ uthotho lwesandwich (i-cookie capper) inokuqhagamshelwa kwi-outlet yokuhambisa isityalo sokwenza ii-cookies, kwaye inokulungelelanisa ngokuzenzekelayo, idiphozithi kunye nekepusi ngesantya sama-cookies angama-300 (imiqolo engama-150 yeesonka) ngomzuzu. Iindidi ngeendidi zebhiskithi ezithambileyo nezilukhuni, iikeyiki zingaqwalaselwa ngomatshini wesandwich (icokie capper). Inokutyiswa nge-biscuit feeder yamaphephancwadi kunye nenkqubo yesalathiso. Umatshini wecookie yesandwich emva koko ulungelelanisa, uqokelela, ungqamanisa iimveliso, ufaka inani elichanekileyo lokugcwalisa, emva koko ufake umphezulu kwimveliso. Iiswitshi emva koko zihanjiswa ngokuzenzekelayo ziye kumatshini wokusonga, okanye kumatshini wokukhawulezisa wenkqubo engaphezulu. Le yindlela umatshini wesandwich (cookie capper) owenza ngayo ii-biscuits.Ukucaciswa kweNgcaciso ePhambili yoMgca weNdibano yeCookie:Umthamo wemveliso: approx. 14400 ~ 21600 sandwiches / minUkulinganiswa kweziqwenga zemveliso: ii-30 ii-pcs / minUkuhambisa iintloko: 6 ukuya ku-8Iintloko zokufaka ikuki: 6 ukuya ku-8Amandla: 380V / 12KWUbubanzi bebhanti: 800mmUbukhulu: L: 5800 xW: 1000 x H: 1800mm
Umgca wokwenza i-lollipop
Uthotho lwe-DF lwe-YINRICH lusetyenziselwa ukuvelisa ii-lollipops eziphezulu ezibilisiweyo. Iziphumo zomthamo zinokuvela kwi-200kgs / h ukuya kwi-2000kgs / h.
I-GD50 Lab Scale Sceagetor
I-JZM120 (90 ~ 120kg / h) umgca we-marshm
I-GDQ300 -A Ukuvavanywa kwetyala le-jelly piedy piedy piedy yomthengi weHungary
Imveliso isebenza ngendima ebalulekileyo ekuphuculeni imveliso. Kungaka kakhulu ixesha labantu lokusebenza kunye nomthwalo, ke abantu baya kukhulisa amandla abo.
I-DF200 LOLLIPOP DE-I-DEARD SEFIC
I-DF200 LOLLIPOP DE-Imveliso yokuFumaneka kweMveliso yemveliso-Ukuveliswa kwetyala ngaphambi kokuthunyelwa kwi-YINRrich Ifektri yomthengi we-Uganda.